जुत्ता सिलाउन आउनेले सेवल रामलाई भन्नुहुन्छ, ‘तपाई पनि नेता !’ | सहारा टाइम्स
Home » samaj » जुत्ता सिलाउन आउनेले सेवल रामलाई भन्नुहुन्छ, ‘तपाई पनि नेता !’
जुत्ता सिलाउन आउनेले सेवल रामलाई भन्नुहुन्छ, ‘तपाई पनि नेता !’
पुतली सडकको बाटो हुँदा शंकरदेव क्याम्पसको आगाडीबाट वागवजारको बाट हुँदै पुरानो वसपार्कतिर हिड्नु भयो भने पचास मिटर अगाडी लेफ्ट साइडको पुरानो भित्तामा मधेश मुलका केही युवाहरु घाम र पानीबाट जोगिनका लागि पुरानो (ठाउँ ठाउँमा च्यातिएको) छाता तानेर अडेस लागेर जुत्ता सिइरहेको देख्नु हुन्छ ।
तीनजनाको समूहमा बस्नु भएको सो भित्तामा टाँसिर एकजना दुब्लो पात्लो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । प्रायः सेतो सर्ट र आकाश रंगको प्यान्टमा देखिने उहाँ समान्य व्यक्ति होइन । उहाँ यो देशको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य सेवल राम हुनुहुन्छ । ३२ वर्ष पहिलो काठमाडौ छिर्नुभएका उहाँ स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको साथमा राजनीतिक शुरु गर्नुभएको थियो । उहाँसँगै राजनीतिक शुरु गर्नुभएका कतिपय नेताहरु कहाँबाट कहाँ पुगिसक्नु भयो तर सेवल राम अझै त्यही जुत्ता सिलाई गरेर आफ्ना घर परिवार पालिरहनु भएको छ ।
उहाँले सोधे, तपाई मधेश राजनीतिकका पुरानो कार्यकर्ता । तपाईसँगै राजनीतिकमा छिर्नुभएका नेताज्युहरु कहाँबाट कहाँ पुगिसक्नु भयो तपाई यही भित्ताको आडमा बसेर गुजारा चलाई रहनु भएको छ किन ? अनि उहाँले जवाफ यस्तो जवाफ दिनुभयो, ‘मेरो लागि जे काम छ त्यही ठिक छ । मेरो पेस यही हो म यसैमा खुश छु । म यसैमा रमाई रहेको छु ।’
राजनीतिकमा किन लाग्नु भयो त भनि जिज्ञासा उहाँले राजनीतिक कुनै व्यपार होइन, यो एउटा पवित्र उद्देश्यले गर्ने सेवा मात्र हो र म त्यसको माध्यमबाट सेवा गरिरहेको छु भनि जवाफ दिनुभयो । यस्तो कुरा सुनेपछि केही छिन उहाँसँग गफ गरौं भनि जस्तो लाग्यो र त्यही नजिकै रहेको एउटा चिया पसलमा पस्यौं । ३२ वर्ष पहिले जुत्ता सिउने र पालिस गर्ने कामका लागि काठमाडौ छिरेका २० वर्षीय केटो सेवल राम हेर्दा हेर्दै नेता हुन्छ भने कसैले सोचेको थिएन । स्वयं सेवल रामलाई पनि लागेको थिएन ।
महोत्तरी सुन्दरपुरका सेवल राम ८ कक्षाको पढाई छाडेर घरको खर्च धान्नका लागि उहाँ काठमाडौका लािग हिड्नु भएको थियो । उहाँकै गाउँका दुखा राम जो काठमाडौमा घुमेर जुत्ताको मर्मत र पालिस गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँकै पछि पछि लागेर २०४३ सालतिर काठमाडौ छिर्नुभएको थियो उहाँ । दुखा रामसँगै सेवल राम पनि चावेलतिर बरालिनु भएको थियो । तराई मधेशबाट पहिलो पटक काठमाडौ आउनु भएका सेवल रामलाई यहाँ एडजस्ट गर्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो ।
दुखा रामको पछि पछि सेवल राम
दुखा रामको पछि पछि लागेर जुत्तामा पालिस गर्न सिक्नु भएका सेवल राम धेरै दिनसम्म यसरी घुम्न सक्नुभएन । एक नयाँ ठाउँ त्यसमा घुमी घुमी व्यपार गर्नुपर्ने । सेवल रामलाई अप्ठ्यारो भयो । हुन त उहाँ यसअघि भारत गएर अरु अरु काम गरेको अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ । घुम्दा घुम्दै थकाई पनि लाग्ने । आम्दानी पनि नहुने भएपछि सेवल रामले १० दिन नपुग्दै दुखा रामलाई भन्नुभयो, काका म यसरी हिड्न सक्दिन । थकाई पनि निकै लाग्छ र पैसो पनि हुँदैन । बरु म घर जान्छु या कुनै अरु काम खोज्दिनुस् ।’
चावेलको गलीहरुमा डुल्न अभ्यस्त भइसकेका दुखा राम सेवल रामको पीडा राम्रैसँग अनुभव गरिसक्नु भएको थियो । दुखा राम पनि पहिला पहिला यस्तै दुख झेल्नुभएको थियो तर त्यतिबेला उहाँसँग विकल्प नभएको कारण हिडेर नै आफ्नो पसल चलाउनुभयो । अहिले उहाँलाई बसेर काम गर्न जाँगर चल्दैन । हिडेर नै व्यपार गर्न सजिलो भएको छ ।
सेवल राम भर्खरको केटो भएका कारणले उहाँलाई काठमाडौको गली गली हिड्न गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसमा पनि त्यतिबेला अहिलेको जस्तो काठमाडौ थिएन । मधेश र मधेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । अहिलेको जस्तो सुविधा सम्पन्न पनि थिएन काठमाडौ, आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सेवल रामले भन्नुभयो, १० दिनमै काका दुखा रामसँग हिड्न छाडि दिए ।’ दुखा रामले नै वागबजार (शंकरदेव कलेज भएको बाटो) मा महोत्तरीकै एकजना सैलुन वालालाई चिन्नुभएको थियो । उहाँ त्यही लगेर सेवल रामलाई लगेर राखि दिनुभयो ।
गाउँकै भएका कारणले सेवल रामले पनि सैलुन बालालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई अर्को दुखा राम काका भेटे जस्तै भयो । सैलुन बालाको सहयोगमा उहाँले बागवजारकै सडक पेटीमा जुत्ता पालिस गर्ने सामग्री लिएर बस्न थाल्नुभयो ।
सडकको पेटीमा बस्न थालेका सेवल रामसँग विस्तारै विस्तरै ग्राहकहरु जुट्दै गए । चिन जान हुँदै गयो । तर १० दिन मात्र दुखा रामसँग हिडेको कारण काममा त्यति सफाई पाउनु भएको थिएन । अर्थात त्यति राम्रो काम जान्नु भएको थिएन । अलि अलि पालिस गर्न मात्र आउँथ्यो उहाँलाई । विस्तारै त्यही पालिस गर्दै जुत्तालाई मर्मत पनि गर्न थाल्नुभयो ।
सेवल रामको सामुदायिक पेसा भएपनि यो पुर्खौली पेसा चाहि होइन । उहाँको घरमा जुत्ता पालिस गर्ने काम कसैले गरेका छैनन् । उहाँका बुवा अर्काको घर खेतमा काम गरेर घर व्यवहार चलाउँनु हुन्थ्यो । हालसम्म पनि उहाँका घरमा कसैले यो काम थालेका छैनन् ।
भारतको पञ्जाव पनि पुगे
आठ कक्षा पढ्दै गर्नुभएका सेवल रामलाई के त्यस्तो पर्यो जो काठमाडौको पेटीमा बस्न बाध्य बनायो । खोतल्ने प्रयास गर्यौं । उहाँ भावुक हुँदै भन्नुभयो, मलाई पढ्ने इच्छा एकदमै थियो । आमा बुवाले पनि पढ्न भन्नुभएको थियो । जसरी पनि पढाउँछु भनि भन्नुभएको थियो । म नियमित स्कूल पनि जान्थे तर एक दिन मेरो बुवालाई पेरालाइसिस लाग्यो ।
त्यसपछि मेरो लागि संसार शुन्य जस्तै भयो । छोराछोरीलाई हुर्काउने, पढाउने लेखाउने सबैको हेरचाह गर्ने घरको मुख्य व्यक्ति बुवा नै थाला परेपछि घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा आइ लाग्यो । हुन त आमाले म सबै गर्छु तिमी पढ भन्नुहुन्थ्यो तर मेरो मन मानेन र मलाई थाह थियो कि आमाले यतिको जहान परिवार चलाउन सक्दैन ।’
उहाँले आफ्नो विगत सुनाउँदै भन्नुभयो, त्यसपछि म स्कूल जान सकिन । श्रीमती, दुईजना भाइ, दुई जना वहिनीको हेरचाह र लालपालन गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आइपुग्यो । आमा पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ त्यति बाहिर काम गर्न जानु हुन्थेन । हाम्रो अवस्था यस्तो थियो कि एक दिन काम नगरि खान पाउदैन्थ्यौं । म कहिले काँही अर्काको खेतमा काम गर्न जान्थे अथवा पाएका कामहरु गर्थे । त्यसबाट भएका आम्दानीले दुईटा भाइलाई पढाउँथे पनि आमाबुवाको हेरचाहमा पनि खर्च हुन्थ्यो ।’
यसरी जीवन कति दिनसम्म चल्छ । यहाँ दुख गरेर पनि केही भइरहेको छैन । अनि गाउँकै साथीहरुसँग सेवल राम भारतको पञ्जाव भाग्नुभयो । त्यतिबेला उहाँको उमेर १० वर्षको मात्र थियो । पञ्जावमा ५ वर्षसम्म काम गर्नुभयो । सेवल राम पञ्जावमै हुँदा उहाँको बुवाको मृत्यु भएको थियो । सेवल राम घर फर्किनुभयो । बुवाको काजक्रिया सम्पन्न गर्नुभयो ।
उहाँमाथि झन जिम्मेवारी थपियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एक दिन मेरै गाउँको दुखा काका काठमाडौ आउन लाग्नु भएको थियो । मैले त्यो थाह पाएर आमा र श्रीमतीसँग सल्लाह गरेर काकासँग काठमाडौ आएका थिए, त्यतिबेला सायद म २० वर्षको थिए होला ।’
सेवल रामको बालविवाह
६ कक्षामा पढी रहँदा सेवल रामको विवाह भएको थियो । विवाह कसरी भयो, के के भयो सेवल रामलाई अहिले केही सम्झना छैन । आमा–बुवाको इच्छा भयो विवाह गरि दिनुभयो, सेवा राम भन्नुहुन्छ । दुखा काकासँग काठमाडौ आउनु भएका सेवल राम कहिल्यै घर फर्किनु भएन । कहिले काहीँ पर्व तिहारमा आउ जाउ हुन्थ्यो, त्यति हो । वागबजारको सडक पेटीमा दुई महिनासम्म निकै गाह्रो भएको थियो । पछि पसल जम्दै गयो । त्यतिबेला उहाँ महिनाको १०–१२ हजार रुपियाँ कमाउँनु हुन्थ्यो ।
काठमाडौमा काम गर्न थालेपछि सेवल रामले एउटा छोरा पाउनुभयो । त्यसपछि श्रीमती र छोरालाई काठमाडौमै आफ्नै साथमा राख्न थाल्नुभयो । घरमा दुई भाइ, एकजना बहिनी र आमा थिए । उहाँहरुलाई कहिल्यै कुनै अभाव हुन दिनु भएन । कहिले काही आमालाई पनि काठमाडौ ल्याउँनु हुन्थ्यो । भाइहरु पनि आउँथे । त्यतिबेला उहाँको कमाइ राम्रै थियो । अलि अलि जग्गा जमिन पनि उहाँ जाड्नु भयो । घर बनाउने सुरसार पनि गर्नुभयो ।
यसरी हुनुभयो नेता
जब उहाँ समाज सेवा र राजनीतिकमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँको कमाईमा ब्रेक लाग्यो । हेर्दा हेर्दै सेवल राम काठमाडौमा नेता हुनुभयो । काठमाडौमा आफ्नो पेसामा यति पपुलर हुनुभयो कि २०५७ सालमा नेपाल छाला तथा जुत्ता मजदुर मञ्च गठन गर्नुभयो । त्यसको एक वर्षपछि अर्थात २०५८ सालमा राम कल्याण मञ्च गठन गर्नुभयो ।
त्यसपछि सेवल रामप्रति धेरैको आकर्षण बढ्यो । अरुलाई परि आएको बेलामा सहयोग गर्ने, अरुको लागि बोलि दिने अर्थात काठमाडौमा जुत्ता सिलाई काम गर्नेहरुको नेता हुनुभयो उहाँ, अभिभावक हुनुभयो उहाँ । त्यसपछि त बागवजारको पेटीमा रहेको उहाँको पसल हप्तौ, महिनौ दिनसम्म बन्द हुन थाल्यो । यस्तै संस्थाको काम गर्न हिड्न थालेपछि उहाँको सम्पर्क तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहसँग भयो ।
सो पार्टीका कार्यकर्ता महेन्द्र आनन्दको साथमा गएर गजेन्द्रनारायण उहाँकै निवासमा गएर भेट्न् भएको थियो । गजेन्द्रनारायण सिंहसँग भेटेपछि उहाँ राजनीतिकप्रति आकर्षित हुनभएको थियो । मधेश र मधेशीप्रतिको विभेद, असमानताको विरोधमा संघर्ष गर्ने भनि उहाँ नेपाल सद्भावना पार्टीमा आवद्ध हुनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, राजनीतिक गुरु भन्नुहुन्छ भने महेन्द्र आनन्द मेरा गुरु हुनुहुन्छ, र राजनीतिक आदर्श गजेन्द्रनारायण सिंह हुनुहुन्छ ।’
राजनीतिक र समाजसेवामा लागेपछि उहाँको कारोवार डाउन भयो । तर त्यतिबेलासम्म उहाँकणे समस्या टरिसकेको थियो । दुईटा भाइ पनि ठूला भइसकेका थिए । उनीहरु पनि कमाउन शुरु गरिसकेका थिए । दुवै भाइ वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । सेवल रामलाई राजनीतिक प्रतिको लगाव देखेर उहाँका भाइ विन्देश्वर राम र सुरेन्द्र रामले पनि सेवल रामलाई भनेका थिए रे, ‘दाइ तपाई राजनीतिक गर्नुस्, हामी तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छौं ।’ तर सेवल राम राजनीतिक र समाजसेवामा लागेपनि उहाँले आफ्नो काम कहिल्यै छाड्नु भएन । अर्काको जुत्तामा निरन्तर पोलिस गरि नै रहनुभयो ।
राजनीतिक र समाज सेवामा सक्रिय सेवल रामले फूर्सदको समयमा पेटीको पसल खोलि हाल्नु हुन्थ्यो । उहाँको पसल एउटा झोलामा मात्र सिमित छ । एउटा केही औछ्याउने आछ्यायो । र, त्यसमा केही समाग्री राखेर पसल चलायो । फुर्सदमा भएको बेला खोले पनि महिनाको १०–१५ हजार अहिले पनि कमाउँनुहुन्छ उहाँले । ०५९–६० तिर नेपाल छाला तथा जुत्ता मदुर मञ्चको तर्फबाट भृकुटी मण्डपमा एउटा वृहत कार्यक्रम गर्नुभएको थियो सेवल रामले ।
सो कार्यक्रममा गजेन्द्रनारायण सिंहलाई प्रमुख अतिथी बनाएको थियो । ती सम्पूर्ण कार्यक्रमको खर्च सेवल रामले एक्लै जुटाउनु भएको थियो । उहाँ भन्नहुन्छ, राजनीतिक गतिविधि र विभिन्न समाजिक काममा म यति हिडछु आउ जाउ गर्छु आजसम्म कसैले एक पैसा पनि लिएको छैन । चाहिएकोे बेलामा पार्टीलाई कार्यकर्ता जुटाइदिन्छु त्यसमा लागेको खर्च पनि आफै व्यहोर्छु ।’
श्रीमतीलाई पनि छाडुछु भनेपछि
२०४६ सालदेखि निरन्तर आन्दोलनमा लागेका सेवल राम मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन २ मा पनि सक्रिय भएर काम गर्नुभएको थियो । पार्टीले जहाँ जुन मोर्चामा खटाई दिन्थे त्यहाँ पुगि हाल्नुहुन्थ्यो सेवल राम । मधेश होस् या काठमाडौको कुनै गलि जहाँ पनि सेवल राम पुग्नुहुन्थ्यो । आन्दोलन र सक्रियताले सेवल राम मधेशका नेता हुनुभयो ।
उहाँलाई नेपाल सद्भावना पार्टीमा सबैले चिन्न थाल्यो । सबैले आदर गर्न थाल्यो ।
नेपाल सद्भावना पार्टीको वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट सेवल रामलाई दलित मञ्चको अध्यक्ष बनाएको थियो । उनी पोल्टिक्समा झन सक्रिय हुनुभयो । एकदिन उहाँका श्रीमतीले भनिन्, तपाईले काम धन्दा गर्न पनि छाड्नु भयो ।
खाली अरुको कामका लागि कुदि रहनुहुन्छ यसरी कसरी चल्छ जीवन ।’ त्यसपछि सेवल रामले आफ्ना श्रीमतीलाई भन्नुभयो, हेर बरु म तिमीलाई छाड्न सक्छु तर म राजनीतिक र संस्था छाड्न सक्दिन । मलाई अरुको दुखमा सहयोग गर्न आनन्द आउँछ, साथीहरुलाई यति त महसुस भएको छ नि कि कमसे कम काठमाडौमा कोही त आफ्नो छ । मलाई अब कमाउनु छैन, छोरा छोरी हुर्के सके । खाने पुग्ने गरि कमाई नै रहेको छु , छोरा छोरीलाई पढाई नै रहेको छु अरु मलाई के चाहियो ?’
त्यसपछि उनका श्रीमतीले पनि आजसम्म कहिल्यै त्यो कुरा उठाएन । उहाँका पनि दुईटा छोरा छन् एउटी छोरी छिन् । जेठो छेरा बीएडसम्म पढेर उदयपुरको एउटा नीजि बैंकमा काम गरिरहेका छन् भने कान्छो ११ कक्षामा दाइसँग बसेर पढी रहेका छन् । छोरीको विहे भइसकेको छ । सेवल रामलाई गुजारा गर्ने अब समस्या छैन । आफूलाई चाहिने जति जुत्ता पालिस गरेर कमाई हाल्छन् । त्यही कमाईबाट घर व्यवहार चलाउनुको साथै आइपरेको बेला साथी भाइलाई पनि सहयोग गर्छ । अहिले उहाँ राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजन हुँदा उहाँ श्यामसुन्दर गुप्ताको पक्षमा लाग्नु भएको थियो । पछि अनिल कुमार झाले संघीय सद्भावना पार्टी बनाउँदा उहाँ त्यतातिर लाग्नु भएको थियो ।
२०७० सालको दोस्रो सविधानसभा चुनावमा उहाँ चुनाव लड्नका लागि टिकट माग्नु भएको थियो । तर पार्टीले उहाँलाई टिकट नदिएर समानुपातिकमा नाम राखेको थियो । तर, एउटै सीट आउँदा सेवल रामसम्म पुग्न सक्नुभएन । अनिल झाले आफ्ना श्रीमती डा.डिम्पल झालाई सविधानसभा सदस्य बनाउनु भएको थियो ।
त्यसमा पनि सेवल रामलाई गुनासो छैन । यसपटकको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि राजपा नेपालसँग टिकट नै माग्नुभएको थियो तर उहाँलाई टिकट नदिएर दलित कोटामा समानुपातिक उम्मेदवार बनायो । तर, यसपटक पनि उहाँ समानुपातिक सांसद बन्न सक्नुभएन । तैपनि दुखि छैनन् सेवल राम । उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले नपाउनुमा पक्कै पनि म मा केही कमी रहेको होला त्यही भएर मलाई दिएन । म अझै पार्टीमै सक्रिय छु । एक न एक दिन पार्टीले पक्कै पनि विश्वास गर्नेछ ।’
वागबजारमा उहाँको परिचय अहिले फेरिएको छ । पहिला पहिला जुत्ता पालिस गर्नेको रुपमा चिनिन्थे भने अहिले उहाँलाई मधेशी नेताको रुमपा चिन्न थालेको छ । वागवजारमा छिर्दा उहाँलाई देशको राजनीतिक समाचार सोध्छन् व्यपारीहरु (पसले) ले । उहाँले पनि जानेका बुझेका कुरा भन्दिनु हुन्छ । कहिल्यै काही त जुत्तामा पालिस गराउन आउने व्यक्ति पनि सेवल रामसँग कुरा गर्दा छक्क पर्नुहुन्छ ।ण् ग्राहकले आफै भन्नुहुन्छ, ‘तपाई नेता हो ।’